Miisaaniyadda Dawladda ee xilliga Gu'ga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Miisaaniyadda Dawladda ee xilliga Gu'ga
La daabacay torsdag 12 april 2012 kl 12.16
Qidmadda ra'sumaalka aan guurin oo la dhimo 630 malyuun oo koron sannadka 2013, middaasina looga gol leeyahay sidii loo dhiiri-gelin lahaa dhismaha guryaha dabaqyada ah ayaa ka mid ah qorshooyinka dawladda ee miisaaniyadda xilliga gu'ga.
Iyo sidoo kale in la dheereeyo muddada sannooyinka aey ka fasaxan yihiin qidmaddaha guryaha cusub lana gaarsiiyo 15 sannadood halka ey iminka ka yihiin toban sannadood. Qorshahanna oo ku kici doona 960 malyuun oo koron.
Tallaabooyinka is-bedel ee qorshaha miisaaniyadda ayey sidoo kale ka mid yihiin: kireeynta guryaha ee gacanta labaad, dhimista qidmadda ra'sumaalka aan guurin ee guryaha dabaqyada ah. Middaasina looga gol leeyahay sidii loo dardar-gelin lahaa wareegga suuqa guryaha, sida uu sheegay Fredrik Feinfeldt, madaxa dawladda Iswiidhen.